खेत खन्दा माटोको भाँडो भेटियो खोलेर हेर्द सबै च’कित ! – Hamro24News
July 11, 2021 adminLeaveaComment on खेत खन्दा माटोको भाँडो भेटियो खोलेर हेर्द सबै च’कित !
वास्तवमा, त्यहाँ खन्दै गर्दा सुन र चाँदीका सिक्का बाहिर आउन थाले । यी सिक्का पुरानो समयका हुन् । गाउँलेहरूले सिक्का ट्र्याक्टरको ट्रेलबाट खसेपछि थाहा पाएका हुन् । खेतमा भएको सम्पतिका बारेमा जानकारी पाउने बित्तिकै ठूलो संख्यामा गाउँलेहरू त्यहाँ भेला भए ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
रहमतुल्ला इब्ने मोहम्मद अरबीमा चाँदीको सिक्कामा र कलमा सुनको सिक्कामा लेखिएका छन् ।फार्मका मालिक ओम सिंहका अनुसार केही सिक्का बाहिर आए । यद्यपि उनीहरूले कति सुनको र कति चाँदीको हो भन्ने थाहा छैन । उही समयमा, गाउँ प्रमुखले त्यो सिक्का देखेको छैन भनेर बयान दिएका छन् एडीएम अरविन्द सिंह भन्छन् कि उत्खननको क्रममा कुनै पनि धातु भेटिएको खबर आएको छ ।यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । तर त्यहाँका गाउँले कै भाग्य चम्किएको बुझिएको छ ।
सर्प समात्ने महान बुबा छोरि , “अ’जिङ्गरले पनि टो’क्यो तर ड’र मानिन” (भिडियो सहित)
कोसी बाँध भत्किँदा भारतको बिहारमा हजारौँ परिवार विस्थापित